မီးခိုးရောင်ဗီနိုင်း Tarp ပတ္တူထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Rongqi
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Tarps နှင့်ကြမ်းပြင်ဖျာ > မီးခိုးရောင်ဗီနိုင်း Tarp ပတ္တူ
မီးခိုးရောင်ဗီနိုင်း Tarp ပတ္တူ
မီးခိုးရောင်ဗင်းနင်းရွက်ဖျင်သည်ရေစိုခံ၊ မီးလျှံနှင့်ခရမ်းလွန်ဆန့်ကျင်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ရေလုံရေလုံအိတ်ကိုအိမ်ပြင်၊ အပြင်ဘက်တဲများ၊ တဲများ၊ ပြင်ပစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
550G 1000D * 1000D 18D * 18D တာပေါ်လင် PVC Flame Retardant ရေစိုခံအရည်အိတ် Tarps မီးဘေးကာကွယ်နိုင်သော PVC မီးခိုးရောင်ဗင်းနိုင်း Tarp Canvas
အသွင်အပြင် - ရေထည်၊
50m / လိပ်
အသုံးပြုမှု - အပြင်ဘက်၊ အပြင်ဘက် - တဲ၊ အပြင်ဘက် - အောင်း၊ ပြင်ပ - စိုက်ပျိုးရေး
●အများပြည်သူလွှဲပြောင်းပေးရမည့်အများပြည်သူလွှဲပြောင်းမှုအခွန်အခများကိုထုတ်ယူခွင့်နှင့်အမြတ်ငွေအားလုံးအခွန် ၇ ဆင့်အတွက်တောင်းခံသည်။
The shipment will be arranged within 15 days of payment and we will arrange the shipment as soon as possible. By default, FedEx specifies that other couriers can contact customer service to change the shipping difference. The default shipping cost may beabit wrong, if there is an error, after submitting the order passenger service will change the shipping cost according to the အလေးချိန် and region inatimely manner, there isaproblem can directly contact the customer service.
hot Tags:: Grey Vinyl Tarp ပတ္တူ, ပေးသွင်းသူများ, တရုတ်, အထူးလျှော့စျေး, အရည်အသွေး, ဖန်စီ
တာပေါ်လင် PVC မီးလျှံ
မီးခံနိုင်သော PVC အပြာရောင်ဗီနိုင်း Tarp